⭐️180° Isixeko Jonga i-Waterfront Apt⭐️ 100MtoRhodesStation - I-Airbnb
⭐️180° Isixeko Jonga i-Waterfront Apt⭐️ 100MtoRhodesStation
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDong
Vuka uze ubuke isixeko esihle kunye namanzi 'aseKhanada Bay', kule ndawo intle yokuhombisa ilanga. Le flethi isembindini wesikhululo setreyini esikufutshane eRhodes, ivenkile enkulu, iziko lokuthenga i-Ikea kunye neevenkile zokutyela. Ilungele zonke iindwendwe enoba uhamba ngezoshishino.
Ukuhamba imizuzu eyi-1 ukuya kwisikhululo saseRhodes
Ukuhamba imizuzu eyi-3 ukuya e-IKEA Shopping Centre
Ukuhamba imizuzu eyi-3 ukuya
e-Rhodes waterfront Imizuzu eyi-7 xa uhamba ngemoto usiya kwiOlimpiki Park ANZ Stadium
Igumbi lokulala: Amagumbi okulala atofotofo anembonakalo enkulu eyenza umqeshi azive epholile kwaye emnandi. Amagumbi okulala ayi-2 anokuhlala iindwendwe ezi-4 kunye nebhedi enkulu eneenkwenkwezi eziyi-5. Iwodrophu eyakhiwe ngaphakathi enesipili esisesilingini ineehengari neeshelfu. Kusetyenziswe iklasi ye-nbn™ ekhawulezayo.
Igumbi lokuhlambela: Igumbi lokulala linegumbi lokuhlambela elingaphakathi. Kukho ishampu, i-shower gel, isepha yezandla engamanzi, isixhobo sokomisa iinwele neetawuli ezisandul 'ukuhlanjwa. Iflethi iquka igumbi elinye lokuhlamba iimpahla elinomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla.
Ikhitshi: Ikhitshi lineoveni yombane, indawo yokuphekela igesi, izinto zokupheka, iketile, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, i-toaster nezinto zokupheka ezisisiseko kwindawo yakho yokuhlala.
55" TV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Umbuki zindwendwe ngu- Dong
Hi, I am Dong. Welcome to Sydney ~ I am an architect. Working and living in Sydney. I look forward to meeting you :)
Inombolo yomthetho: PID-STRA-14740
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rhodes